Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Epoxy Hardening ထုတ်လုပ်သူနှင့် Epoxy Hardening ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ် Epoxy Hardeningစက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကဏ္ဍအားလုံးကိုဆက်လက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ထူးချွန်မှတဆင့်ဖောက်သည်များ, ဝန်ထမ်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရေရှည်တန်ဖိုးကိုပို့ခြင်းအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တည်ဆောက်ရန်နှင့်ဦးဆောင်-edge စျေးကွက်ဆောင်ခြင်းငှါ, ဆန်းသစ်တီထွင်ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
Epoxy Hardening ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Epoxy Hardening ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Epoxy Hardening ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဒီဇိုင်းတစ်ခု epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအလွန်ထူထပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်-ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်.မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာကော်အခြားသမားရိုးကျ amine epoxy ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.ပိုမိုမာလာသည်-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.ခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေ-EP-2007-8190 မုန့်ဖုတ်အချိန်နှင့်အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,မုန့်ဖုတ်အချိန်တိုတောင်း.မြင့်မားသောပြီးနောက်-အပူချိန်ကုသ,အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသောအပူချိန်မှာရရှိနိုင်ပါသည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 ရှည်နိုင်သည်-သက်တမ်းဓာတ်တိုးခံနိုင်ရည်နှင့်စိုထိုင်းဆ၏ကျယ်ပြန့အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပျောက်ကင်းစေသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 200oC အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုနှုန်းရှိသည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,သတ္တုများ,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,အဖြစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ. အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအလိုအလျောက်စက်မှုအလေးချိန်နှင့်မီတာစက်များအတွက်သင့်လျော်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် ECRoHS 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95